Madax-dhaqameedka, Waxgaradka iyo Siyaasiyiinta Reer DILA oo Hadhimo-sharafeed ku Maamuusay Murrashaxiinta KULMIYE – WARSOOR
Dila – (warsoor) – Madaxdhaqameedka, waxgaradka, aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta degmada Dila ee Gobolka Awdal, ayaa hadhimo-sharadeed ku maamuusay murrashaxiinta jagooyinka Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo maalmahan hawlo shaqo ku joogay gobolkaasi.
Munaasibadda hadhimo-sharafeedka oo ka dhacday duleedka Bari ee magaalada Dila maanta, ayaa waxa murrashaxiinta KULMIYE ku wehelinayey wasiirro, xildhibaanno iyo saraakiil kale oo xisbiga katirsan, kuwaas oo kala qaybqaatay casuumadda lagu sharfay murrashaxiinta KULMIYE.
Geesta kale, Xisbiga KULMIYE waxa uu xafiisyo cusub ka furtay degmada Dila ee gobolka Awdal, kuwaas oo saldhig u noqon doona ololaha xisbigu geli doono doorashooyinka madaxtinimada ee dalka ku soo foolka leh, isla markaana ay kirayntooda iyo qalabayntoodaba ay iskood u dhammaystireen taageerayaasha xisbiga ee degmadu.
Wasiirka wasaaradda Shaqada iyo arrimaha bulshada Md. Maxamed Cabdilaahi Obsiiye oo ay weheliyaan maamulka xukuumadda iyo xisbiga u qaabilsan degmada Dilla, ayaa isagu si rasmi ah xadhigga uga jaray saddex xafiis oo ay garabyada dhallinyarada iyo haweenku ka hawlgeli doonaan iyo mid kale oo guud ahaan arrimaha xisbiga ee degmada laga hagi doono.
Geesta kale, Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu waxa uu isla goobta xadhigga lagaga jaray xafiisyada cusub uu agab ciyaareed ku guddoonsiiyey qaar kamid ah kooxaha kubadda cagta ee degmada Dila, taas oo qayb ka ah dhiirrigelinta xisbiga KULMIYE ee da’yarta dalka, iyada oo qaar kamid ah dhallinyaradii agabka la guddoonsiiyeyna si weyn uga mahadceliyeen dhiirrigelinta xisbiga KULMIYE la garab joogo.